[Review] Top 8 Bếp điện từ nào tốt bán chạy nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 8 Bếp điện từ nào tốt bán chạy nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Ikhaya » Impahla yasendlini » [Review] Izipheki zikagesi ezithengiswa kakhulu eziyi-8 namuhla
Kungabonakala ukuthi umpheki wokungeniswa osebenza kahle kakhulu upheka ngokushesha kunezinye izinhlobo zabapheki, futhi uphephile kunezitofu zegesi. Ngaphezu kwalokho, usayizi uhlangene, ngakho-ke uthandwa kakhulu ngabasebenzisi. Imigqa yomkhiqizo yabapheki bokungeniswa emakethe ihluke kakhulu, okwenza abasebenzisi badideke lapho bekhetha. Ake sifunde isihloko esilandelayo ukuze sifunde nge-top 8 isitofu sikagesi okungcono kakhulu namuhla.
1 Siyini isitofu sikagesi?
2 Imibandela yokukhetha ukuthenga umpheki omuhle wokungenisa
2.1 Singakanani isabelomali sokutshala imali?
2.2 Ubukhulu, indawo yokufaka
2.3 Naka izinto ezingaphezulu kwengilazi yesitofu sikagesi
2.4 Idizayini, ibanga phakathi kwamathileyi
2.5 Umsebenzi we-Booster
2.6 Izici zokuphepha
3 Ngakho yiluphi uhlobo lwesitofu sikagesi okufanele uluthenge?
4 Izipheki ezingcono kakhulu ezingu-8 zokungeniswa ongazithenga namuhla
4.1 1. I-Bosch Induction Cooker
4.2 2. I-Midea Induction Cooker
4.3 3. I-Siemens induction cooker
4.4 4. Abapheki
4.5 5. I-Canzy induction cooker
4.6 6. I-Teka Induction Cooker
4.7 7. I-Sunhouse induction cooker
4.8 8. I-Electrolux Induction Cooker
Siyini isitofu sikagesi?
Kuyabonakala ukuthi, isitofu sikagesi kuwuhlobo lwesitofu sikagesi esisebenza ngesimiso sokwandisa ukushisa ngenxa yensimu kazibuthe. Ngakho-ke, lapho isitofu siqala ukusebenza, amandla kagesi ageleza kukhoyili yethusi ebekwe ngaphansi kwengilazi yesitofu futhi akhiqize amandla kazibuthe phakathi kwamamilimitha ambalwa esitofini.
Ngaphandle kwalokho, iphansi lebhodwe lenziwe ngezinto kazibuthe (zingaheha omazibuthe) ababekwe phezu kwesitofu. Khona-ke izothinteka yi-magnetic field futhi ikhiqize ukushisa ukushisa umzimba webhodwe. Ngaleyo ndlela, izofudumeza ukudla. Ngenxa yale ndlela yokupheka, umpheki we-induction unciphisa amathuba okulahlekelwa ukushisa, futhi isikhathi sokupheka sishesha kakhulu.
Imibandela yokukhetha ukuthenga umpheki omuhle wokungenisa
Singakanani isabelomali sokutshala imali?
Lolu wudaba okufanele ulukhombe kuqala njengoba luzothinta uhlobo lomkhiqizo ongawuthenga. Imvamisa, umpheki wokungenisa owodwa udinga kuphela isabelomali esingaba yizigidi ezi-2-3, esicebe kakhulu. Ngokuphambene nalokho, uma ukhetha ukuthenga imikhiqizo yasekhishini ye-multi-cooker, uzodinga imali eyengeziwe. Ngaphezu kwalokho, ezinye izinhlobo isitofu sikagesi Kukhona futhi inhlanganisela yethreyi eyodwa kazibuthe, ithreyi elilodwa le-infrared noma amathreyi amabili anozibuthe elilodwa le-infrared. Lokhu kuzokunika izinhlobonhlobo zezinketho uma unesabelomali esikhulu.
Hhayi lokho kuphela, isabelomali sizophinde sinqume ukuthi uyakhetha yini ukuthenga imikhiqizo yokupheka engenisiwe noma izinto ezihlanganiswe endaweni. Ngoba imikhiqizo ye-induction cooker ehlanganiswe endaweni imvamisa ishibhile kunezipheki zokungeniswa ze-Bosch ne-Hafele.
Ubukhulu, indawo yokufaka
Umbandela olandelayo, ngaphambi kokuyothenga umpheki wokungeniswa, khumbula ukuhlola ubukhulu betshe lekhishi. Udinga ukubheka ukuthi indawo yokufaka i-induction cooker ivulekile. Ngoba lokhu kubaluleke kakhulu ngemikhiqizo ye-multi-cooker edinga ukufakwa endaweni yokuphumula. Ngaphezu kwalokho, ukwakhiwa nokufakwa kwesipheki sokungeniswa nakho kuzothatha umzamo nesikhathi, kodwa ngokuvamile sihlinzekwa ngumthengisi we-induction cooker mahhala.
Ikakhulukazi, ukwazi ubukhulu beshalofu ekhishini kuzokusiza ukuthi ungakhethi ikhishi elingalungile. Eqinisweni, izitofu ezivela kumathreyi okupheka angu-2 ngokuvamile azinzima, kodwa ohlotsheni lwezitofu zikagesi ezinamathreyi okupheka angu-4, zingaba zikhulu kakhulu ngobubanzi, ngezinye izikhathi zibe zinkulu kune-stovetop.
Naka izinto ezingaphezulu kwengilazi yesitofu sikagesi
Qaphela ukuthi imikhiqizo isitofu sikagesi Abantu abavamile abanikezi ulwazi mayelana nengilazi. Ngokuqondene nemikhiqizo ephezulu, kufanele unikeze okuncamelayo izibuko zemikhiqizo efana ne-Schott Ceran, K+. Isizathu siwukuthi lezi zinhlobo zinomthamo omuhle kakhulu wokuthwala nokumelana nokushisa. Ngesikhathi esifanayo, le ngilazi ngokuvamile iyacwebezela, akulula ukuyiklwebha futhi kulula kakhulu ukuyihlanza.
Idizayini, ibanga phakathi kwamathileyi
Uma kwenzeka, ukhetha umpheki we-induction onamathreyi amaningi okupheka, kufanele unake umklamo kanye nebanga phakathi kwamapuleti okupheka. Ibanga elifanele nje, elibanzi ngokwanele lizokusiza ukuthi ulawule kalula phakathi nenqubo yokupheka. Isibonelo, uma ibhodwe lakho likhulu, kodwa izindawo zokupheka zisondelene kakhulu, kuzodala ukuphazamiseka ekuphekeni.
Lona umsebenzi hhayi isitofu sikagesi noma yikuphi. Lona ngokuyisisekelo umsebenzi wokupheka osheshayo. Uma uvula lo msebenzi, ihobhu izosebenza ngamandla angaphezu kokuvamile ukwenza ukupheka kusheshe. Ngesikhathi esifanayo, kuzosindisa isikhathi esiningi.
Imvamisa, eminye imigqa yomkhiqizo we-Bosch ifakwe lo msebenzi. Ngokuphambene, imikhiqizo yezinye izinhlobo nayo iyatholakala kodwa ngezinye izikhathi inomkhawulo. Kodwa-ke, asekhona abapheki bokungenisa abasheshayo abanomsebenzi we-Booster, kodwa imizuzu eyi-10 kuphela ephezulu.
Siyabona ukuthi ukukhiya kwengane kungenye yezici eziyisisekelo ezifakwe emikhiqizweni eminingi yokupheka. Eminye imigqa yomkhiqizo eseqophelweni eliphezulu izofakwa ngokuzenzakalelayo kokucisha ugesi lapho amanzi echichima ekhishini.
Eqinisweni, umsebenzi wokucisha isitofu ngokuzenzakalelayo lapho lingekho ipani/ipani elibekwe esitofini kuwumsebenzi obalulekile wokuphepha. Ngakho-ke, kufanele ucabangele ukuthi uyayidinga noma cha ukuze wenze ukukhetha okufanele.
Ngakho yiluphi uhlobo lwesitofu sikagesi okufanele uluthenge?
Engxenyeni yomkhiqizo isitofu sikagesi Emindenini, imigqa yekhishi ephezulu enezigqoko eziningi zokupheka ithandwa kakhulu kunemikhiqizo esesigabeni esithandwayo. Lo mkhuba cishe uvela ezidingweni zobuhle kanye nenjongo yokusebenzisa isikhathi eside eyenza imindeni ikhethe ukuthenga izipheki zokungeniswa zekhwalithi. Yingakho bezimisele ukutshala imali eningi ukuze bathole umpheki omuhle, osezingeni eliphezulu.
Mhlawumbe yingakho izinhlobo ezingenisiwe zezipheki zokungeniswa (zemikhiqizo emikhulu) zithandwa kakhulu kunemikhiqizo edumile. Ngakho ngokubona kwakho, yiluphi uhlobo lwesitofu sikagesi olungcono kakhulu namuhla? Ebangeni labapheki abangenisa ama-multi-cooker, i-Bosch ne-Electrolux yizona zinketho eziphezulu emakethe.
Ngaphandle kwalokho, izinhlobo zezipheki zikagesi ezivela kubapheki, i-Kocher nazo ziyisiphakamiso esihle ngentengo eshibhile kodwa futhi nekhwalithi enhle kakhulu. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo ethandwa kancane njengeFaster, Fagor, Hafele … nayo inentshisekelo ngabathengi abaningi.
Ngengxenye yemikhiqizo yokupheka okufakiwe okukodwa, ungakhetha ukuthenga imikhiqizo yasekhishini kwa-Sunhouse, Kangaroo, Philips noma Media. Isigaba esilandelayo sizokwethula ngokuningiliziwe ezinye zezinhlobo ezinhle kakhulu zezipheki zokungeniswa ezitholakala namuhla.
Izipheki ezingcono kakhulu ezingu-8 zokungeniswa ongazithenga namuhla
1. I-Bosch Induction Cooker
Cishe bambalwa abantu abaziyo, i-Bosch wumkhiqizo womhlaba wonke onendlunkulu eJalimane. Nokho, izimboni ezikhiqizayo zitholakala ezingxenyeni eziningi zomhlaba. Ikakhulukazi, I-Bosch induction cooker idume ngokusebenza kwayo okuphezulu, izici zesimanje kanye nomklamo owubukhazikhazi, ukuphepha okuphezulu nokuqina. Okugqamile kwemikhiqizo ye-Bosch yikhono lokonga amandla ngempumelelo.
Ngaphandle kwalokho, izitofu zikagesi ze-Bosch eVietnam zithandwa kakhulu engxenyeni ephezulu. Eqinisweni, amamodeli athandwa kakhulu yilawo anezindawo zokupheka ezi-3 noma ezi-4. Njengamanje, imikhiqizo eminingi I-Bosch induction cooker emakethe kungeniswa CBU evela eYurophu (Germany, Spain ..). Ngesimo somnotho esichichimayo, i-Bosch iyisipheki sokungenisa esingcono kakhulu namuhla ngokwekhwalithi ongayikhetha ngokuzethemba.
2. I-Midea Induction Cooker
Uma ungumthandi womkhiqizo weMidea, awukwazi ukuziba isitofu sawo sikagesi. Abapheki bokungeniswa kwe-Midea abagqami nje kuphela ngemiklamo yabo esesitayeleni, kusukela ku-countertop kuya kuphaneli yokulawula ehlaba umxhwele neyinkimbinkimbi, kodwa futhi beza nemiyalo enemininingwane neqondakala kalula yokusebenzisa.
Ngaphezu kwalokho, indawo yokupheka yenziwe ngengilazi yezinga eliphezulu, ecwebezelayo ekwazi ukumelana nokushisa, kulula ukuyihlanza ngemva kokupheka. Ikakhulukazi, kukhona imikhiqizo esethelwe kumamodi wokupheka ahlakaniphile angu-8 ukukusiza ukupheka kalula futhi kalula.
3. I-Siemens induction cooker
Ngokufanayo ne-Bosch, isitofu se-Siemens siwuphawu olusezingeni eliphezulu oluvela eJalimane. Uphawu lokuhweba isitofu sikagesi Lokhu kudala umugqa wekhishi ohamba phambili emakethe yaseVietnam. Ngenxa yezici zayo ezihlakaniphile nezilula, iphephile futhi yonga amandla ngesikhathi esifanayo. Akukhona lokho kuphela, umpheki wokungenisa we-Siemens usebenzisa ubuchwepheshe bokushisisa obusezingeni eliphezulu ukupheka ngokushesha okukhulu.
Ngaphezu kwalokho, izilawuli zokuthintwa zesimanje, izindawo zokupheka ze-flexInduction zikhomba ngobuhlakani phansi ebhodweni. Ikakhulukazi, i-European-standard ye-Siemens induction cooker inezici ezivelele ezingapheka amabhodwe amaningi ngesikhathi esisodwa. Ngaphezu kwalokho, ukusabalalisa amandla ngokulinganayo phakathi kwezitofu kusiza ukonga amandla.
Eqinisweni, abapheki bawuhlobo oluhlanganyelwe lwe-European Appliances Joint Stock Company kanye nezinhlobo ezimbili ezidumile zasendlini emhlabeni, i-EGO ne-Schott Ceran. Imikhiqizo eminingi Ikhishi elivela kubapheki okwamanje ekhiqizwa eSpain noma eJalimane, bese ingeniswa futhi ithengiswe emakethe yaseVietnam.
Kodwa-ke, kusenemigqa ethile ehlanganiswe eVietnam, enamanani ashibhile kunemigqa yomkhiqizo engenisiwe. Ngakho-ke, lapho ukhetha ukuthenga isitofu sikagesi kubapheki, ungase futhi ucabangele le migqa eshibhile ukuze wonge izindleko.
Yize uhlobo oluzalwe sekwephuzile impela (cishe ngo-2011), abapheki bokungenisa abapheki nabo bathwebule ingxenye yemakethe (maphakathi nasekupheleni) ngokushesha okukhulu. Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo ungaqhudelana ngokuqondile nemikhiqizo efana ne-Bosch noma i-Fagor. Kuyabonakala ukuthi abapheki bawumpheki wokungenisa ophambili we-Vietnamese namuhla ngokwekhwalithi nezici.
5. I-Canzy induction cooker
Uma kukhulunywa nge-top 8 isitofu sikagesi Okungcono kakhulu ukuthenga manje, awukwazi ukuziba umkhiqizo Ikhishi elivela kuCanzy. Lona omunye wemikhiqizo edumile emakethe ye-kitchenware.
Lo mkhiqizo uhlangabezana nemibandela yeningi labantu, oku-Delicious, Bo, futhi Kushibhile, futhi efanele ingxenye yamakhasimende emaphakathi nebanga. Ngenxa yokuduma kwabathengi abaningi, abathengisi abaningi bazoba nemikhiqizo yeCanzy. Eminye yemigqa yomkhiqizo ethengiswa kakhulu yezipheki zokungeniswa kweCanzy ihlanganisa: CZ900GB, CZ06I, CZ 922…
6. I-Teka Induction Cooker
Uma ebuzwa ukuthi yiluphi uhlobo lwesitofu sikagesi oluhle, igama elithi Teka libuye lishiwo ngabantu abaningi. Akukona nje ukuthandwa eYurophu, inkampani futhi ithola ukunakwa okuningi kubasebenzisi base-Asia, kuhlanganise neVietnam.
Eqinisweni, uhlobo lwekhishi le-Teka seluneminyaka engaphezu kwe-100 ukhona. Lona futhi omunye wemikhiqizo ehamba phambili emhlabeni emishinini yasekhishini ephezulu enamakhabethe akhelwe ngaphakathi. Khona lapha eVietnam, ekhishini kusuka Teka ekhona emakethe iminyaka engaphezu kwe-15. Isiphenduke enye yezinhlobo zokuqala zabapheki bokungenisa izinto ezithengiswa eVietnam. Kuze kube manje, nakuba kunezinhlobo eziningi zezipheki zokungeniswa, i-Ta isahlukaniswa ngekhwalithi yayo kanye nomklamo omuhle.
7. I-Sunhouse induction cooker
Kuyabonakala ukuthi, ekhishini kusuka Sunhouse kuyisinqumo sokuqala engxenyeni yemikhiqizo yasekhishini ethengekayo. Ngakho-ke, ungathola kalula futhi uthenge imikhiqizo yokupheka okukodwa kwe-Sunhouse eyenziwe eVietnam.
Kanye nemikhiqizo ye-induction cooker eyodwa, i-Sunhouse ikhiqize nemikhiqizo yasekhishini emathreyini amaningi okupheka. Isici esivamile ukuthi imikhiqizo ye-Sunhouse multi-cooker induction cooker ishibhile izikhathi eziningi kunezitofu ze-Bosch noma ze-Chef futhi isasebenza ngokuzinzile.
8. I-Electrolux Induction Cooker
Ngaphezu kwalezi zinhlobo ezingenhla, i-Electrolux iphinde ibe wuphawu lwesitofu sikagesi esidumile esidume kakhulu e-Europe futhi esihlasela ngokushesha imakethe yase-Asia.
Okugqamile okukodwa I-Electrolux induction cooker inomthamo onamandla nokuphepha okuphezulu. Ngaphezu kwalokho, ishisa ibhodwe lokupheka ngokuqondile esikhundleni sokushisisa isitofu. Ngenxa yale modi yokushisisa eyingqayizivele, ukusetshenziswa kwezipheki zokungeniswa kwe-Electrolux ziwonga kakhulu amandla.
Ngaphezu kwalokho, isitofu asiyishisi nhlobo indawo ezungezile futhi sigcina ikhaya lakho lipholile. Mhlawumbe yingakho isitofu sikagesi se-Electrolux siyisinqumo esihlakaniphile esimweni sezulu esishisayo nesiswakeme njengeVietnam namuhla.
Ngethemba ukuthi ulwazi olungenhla luzokusiza ukuthi ube nombono jikelele wemakethe yezitofu zikagesi. Ngasikhathi sinye, uyazi futhi ukuthi yiluphi uhlobo lwe-induction cooker olungcono kakhulu namuhla ukuze luhambisane nezidingo zakho. Abesifazane besimanje kufanele babe ngabanikazi ngokushesha balesi sitofu sikagesi ukuze benze ukupheka kube lula futhi kube lula kunangaphambili. Ngethemba ukuthi uzoba nakho okuhle ngakho isitofu sikagesi Ngiyacela.